iPod Touch Old Ver: — MYSTERY ZILLION
iPod Touch Old Ver:
February 2009 edited September 2009 in Sharing
iPod touch ထဲကိုဂိမ်းနဲ့ဆောဖ်၀ဲတွေ ဘယ်လိုသွင်းရလဲ သီချင်းတွေကတော့ iTunes ကိုသုံးပြီးသွင်းတာပဲ ဆိုင်တွေမှာ သွားသွင်းရင်စျေးကြီးလို့ပါ ပြောပြပေးပါ
အနော်ရထာ wrote: »
ကျွန်တော်တော့ အသေးစိတ်မစမ်းသပ်ရသေးပါ ဒါပေမယ့် လုပ်ရမည့် အဆင့်တွေကတော့
၁) Ipod ကို unlock အရင်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Google မှာ "ipod touch jailbreak " ဆိုတာလေး ရှာလိုက်။ နည်းတွေရလိမ့်မယ်။
၂) အဲဒါပြီးသွားရင် သူက နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Ipod Touch firmware 2.1 ကိုသွင်းပေးသွားမယ်။ သူ့မှာ Installer ပါသွားမယ်။
၃) အဲဒါဆိုရင် နိုင်ငံခြား ဖိုရမ်တွေမှာ (e.g. www.projectw.org) မှာ Ipod Touch Games, applications တွေရှာပြီး ဒေါင်းမယ် သွင်းမယ်ဆိုရသွားပါပြီ။
မှတ်ချက်၊ ၊ ကျွန်တော် မစမ်းသပ်ရသေးပါ။ ကျွန်တော် လဲလုပ်ချင်လို့ လိုက်ရှာထားတာလေး ပြောပြတာပါ။ စမ်းသပ်ဖြစ်လို့ တွေ့ရှိချက်လေးတွေ ပြန်မျှမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ဗျား။
ဘာမှ မလုပ်ခင် iTunes Version 8 ကိုသွင်းထားပါ။ လိုလား မလိုလားတော့ မသိပါ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ရှိတဲ့စက်မှာ လုပ်ကြည့်ပါ အကယ်၍ မအောင်မြင်ရင် မူလ ဗားရှင်းကို Restore ပြန်လုပ်လို့ရအောင်လို့ပါ။
P.S: Try with your own risk. :P
ဒီပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျ ... လမ်းကြုံလို့မေးကြည့်တာပါ ... ကျွန်တော်မှာ ipod nano 4GB လေးတစ်လုံးရှိပါတယ် ... သူက movie file တွေထည့်ရင် ဘာformat နဲ့မှအဆင်ပြေမလဲမသိဘူး ခုလောလောဆယ်တော့ avi format နဲ့ကို display မှာရှိကြောင်းပဲပြတယ် .. မပွင့်ဘူး .. အဲဒါဘာဆော့၀ဲလ်တွေသုံးရမယ် .. ဘယ် file format နဲ့မှရမယ်ဆိုတာ ipod တတ်ကျွမ်းသူများကူညီကြပါဦးဗျာ ... \_:D/
ipod တွေက .mp4 ဖောင့်မန် ကိုသုံးတာ များတယ်
ဟုတ်ကဲ့ .. စမ်းပြီးပါပြီ .. မရလို့ပါအကို .. နောက်ထပ်စဉ်းစားပေးပါဦး :103:
အနော်ရထာရေ...ကိုဒီဘီအေပြောတဲ ့နည်းလေးကိုတချက်try ကြည် ့ပါ...အဆင်ပြေမယ်လို ့ထင်ပါတယ်...အဆင်ပြေရင်တော ့knowledge လေးရှယ်ပါအုံး:101:ကျနော်လည်းမအားသေးလို ့ပါ...အားတဲ ့ရက်မှာကျနော် try ကြည် ့လို ့အဆင်ပြေရင်လည်းပြန်ပြောပါမယ်:30:
ဖြစ်နိုင်ရင် ipod touch jailbreak software လေးဒေါင်းပြီး ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးပါလား
16.2 MB လောက်ရှီတော့ အခက်တွေ့နေတယ် ကျွန်တော် က dial-up user တစ်ယောက်မို့လို့ပါ
လေးပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးပါလား broadband , ADSL user တွေ ရှီရင် တင်ပေးပါ
ကျွန်တော်တို့မြိုမှာ CyberCafe မရှိလို့ပါ
ipod ထဲမှာတင် photo တွေကိုဘယ်လိုဖျက်ရလဲ သိချင်လို့
video တွေ music တွေကိုကျတော့ ဖျက်တတ်တယ် (ကွန်ပျူတာမလိုဘဲနဲ့)
ဓါတ်ပုံတွေပဲ မဖျက်တတ်တာပါ ပြောပြပေးပါ
i Pod ကိုသုံးပြီးတော့ သီချင်းမသွင်းတတ်လို ့ပါ။.... i Pod Player ထဲကို iTunes version 8 ကိုသုံးပြီး ဘယ်လို သီချင်းသွင်းရပါသလဲ... ကျွန်တော်လုပ်ထည့်လိုက်တာ သီချင်းတွေတော့ရောက်သွားပါရဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို ့ရောက်သွားမှန်းမသိပါ။ အဲဒါနဲ ့နောက်တနေ ့ကြတော့ i Pod ထဲကိုသီချင်းအသစ်ထပ်သွင်းလို်က်တယ်... အရင်ထည့်ထားတဲ ့သီချင်းတွေအကုန်လုံးလစ်ကုန်ရောဗျာ... သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကြိုက်ရာလေးပဲသွင်းလို ့မရဘူးလား...လုပ်ကြပါအုန်း... i Pod ကောင်းတယ်ဆိုပြီးသုံးကြည့်တာ ရွာတွေလည်ကုန်ပြီ... စိတ်ညစ်တယ်.... ကူညီကြပါအုန်း....
iTunes မှာ Sync လုပ်ခါနီးကျရင် သီချင်းစာရင်းကို All Songs အစား Just Added ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။ အကယ်၍ play list ကသီချင်းတွေ အားလုံးကို လဲပြစ်လိုက်တာဆိုရင်တော့ Over Write လုပ်သွားမှာပါ။ နဲနဲတော့ လက်ဝင်တယ်ဗျ အိုင်ပေါ့က။ သာမန် mp3 player တွေလို သီချင်းတွေ ပစ်ထည့်လိုက်လို့ မရတာတော့ မကြိုက်ဘူး။
p.s: Try with your own risk.
အဲဒိဆောဖ်၀ဲလေးဒီပေါ်တင်ပေးပါလားဗျာ ကိုကျော်မင်းကို ဒေါင်းလော့ချပေတာတွေက မမှန်ဘူးဖြစ်နေတာ အားနာလို့ပါ ကုညီပါဗျာ
အဲ .. လုပ်ပေးမယ်ဗျ ခဏလေးစောင့်နော်။ ကျွန်တော်လဲ ရုံးမှာဆို မအားတာများနေတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။
I use videora ipod nano converter.It convert to H264(mp4) ,to play on nano.
iPod ကို သီချင်းသွင်းချင်လို့ iTunes software ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲပြောပြပေးပါခင်ဗျာ ဟ`ဟ`:5:
ITstudent wrote: »
ရိုးရိုး အိုင်ပေါ့ကို မသုံးဘူးလို့မသိဘူးခင်ဗျ:d
iPod မှာသီချင်းသွင်းချင်လို့ iTunes ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ?
iTunes software ကို စက်ထဲသွင်းထားပါ။ ပြီးရင် iTunes ထဲကို နားထောင်မည့် သီချင်းများကို Add လုပ်ပါ။ စိတ်ကြိုက် သီချင်းများ Play List ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဖြင့် iPod ကို ကွန်ပျုတာမှာ တတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် iTunes မှာ ကိုယ့် Ipod ပုံလေးပေါ်လာပါမယ်။ သူ့ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် Sync လုပ်စရာ မြင်လာပါမယ်။ Sync ခလုပ်လေးနှိပ်ပေးချင်းအားဖြင့် သီချင်းများ iPod ထဲရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (အသေးစိတ်ရေးထားချင်းမဟုတ်ပါ ... ဆော့ဝဲလ်ကို သုံးကြည့်ချင်းအားဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်)
ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် အကိုတို့ရာ
iPod တခုက iTunes တိုင်းနဲမရဘူး ဆိုတာ ဟုတ်လား?
ကျွန်တော်လဲ တစ်ခုနယ် တိုင်ပတ်နေလို့ပါ ဗျာ
iPod က ဘာအမျိုးအစားဝယ်ထားတာလဲ ဆိုတာရယ် iTunes ဘယ် Version သုံးနေသလဲဆိုတာရယ် ပြောပြပါလား
iPod က Model No. A1099 (60GB) ပါ iTunes Version က 8.0.2.20 ပါ ......:O:O:O
:40:ကိုကြီးတို.ရေ.......။ သားသားကို ဒီလိုပစ်ထား ကြတော့မလားဟင်
ကျွန်တော်ကို ကူညီ ကြပါအုံးဗျာ။ ကျေးဇူးပါဗျာ :102:
လုပ်လဲလုပ်ပေးသေးဘူး ကိုဒီဘီအေကြီး ညာတယ်
မန်းလေးက ကိုရေခဲ ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါလားဟင် အနော်သွားယူမယ်
ဟီးဟီးတော်တော် မအားဖြစ်သွားလို့ပါ။ ခုလောက်ဆိုအဆင်ပြေနေတယ်ထင်တာနဲ့ မေ့သွားတာ။ ကဲဒါဆို ဒီည ကြိုးစားပေးမယ်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ကိုလဲကူပါဦး ကိုဒီဘီရေ .. ကျွန်တော့်ဟာက ipod nano 4GB ပါ .. itunes က version7ပါ ..ဘာ video format မှထည့်လို့မရလို့ပါ ... mpeg format နဲ့ AVI format ကို library ထဲကနေ ipod version ဆိုပြီးပြောင်းထည့်တာပဲမရဘူး ..ကူညီပါဗျာ ... :77:
If your nano is 4th generation,you must use itunes 8.Use videora converter to convert video files.If you don't want to use itunes try with sharepod.
Diamond Heart wrote: »
အကိုပြောတဲ့ videora converter ကိုသုံးပြီးမှ itunes8 ကိုသုံးရမှာလား ဒါမှမဟုတ် videora converter သုံးတာနဲ့ တန်းဖွင့်လို့ရမလား .. ကျွန်တာ်ကပိန်းတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါဗျာ
ညာပြန်ပြီနော် စလုံးရောက်နေတော့ တော်တော် အတတ်ကောင်းတွေတတ်နေတာလား:((
Ipod Video convertor လေးပါ အဆင်ပြေပါစေ
anawrahta wrote: »
ဟီး .. ကျွန်တော်လဲ မနေ့ကမှ စပြီး စမ်းဖြစ်လို့ အခုတင်လိုက်ပြီ။ ဒီထက်မြင့်တဲ့ ဗားရှင်းရှိသေးတယ်။ ခုဟာတော့ ကျွန်တော့်မှာ အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်တော့် Firmware က 1.1.5 ပါ။
I has ipod 8GB 2007 mode A1213
I forget screen number and key
Sorry bro, It'salong time since your question is posted.I forget to check this tread.Please use videora converter to convert videos and add converted videos to itunes library and sync.
iPod တွေထဲကို Audio, video, Picture, Games တွေထည့်ရတာ itune နဲ့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်..
အခု လက်ရှိ itune ver 8.2.1.6 ရောက်နေပါပြီ .. internet connection (ကောင်းကောင်း):D:D ရှိရင် ipod ကို itune နဲ့ ver ပြောင်းလို့ရပါတယ်..
itune 8.2.1.6 ကို ဒီမှာ ဒေါင်းပါ ..
ဘာမှထည့်လို့မရဘူးဆိုရင် Restore Factory Setting အရင်လုပ်ကြည့်ပါ .. အဆင်ပြေပါစေ ..
သိချင်တာလေးရှိရင် granfarz(at)gmail.com ကိုမေးလို့ရပါတယ်.. ကျွန်တော်သိသလောက်ဝေငှပေးပါမယ်..
(မှတ်ချက် .. ကျွန်တော့မှာ ဘာ Pod မှမရှိပါ .. :D)